Ikhamera yeXiaomi Mi 6 icaphukisa abasebenzisi ngomsebenzi okhubekisayo | I-Androidsis
UElvis bucatariu | | Xiaomi
Ngezizathu ekunzima ukuziqonda, iXiaomi Mi 6 izama ukuqikelela isini kunye nobudala bakho xa uzama ukuthatha i-selfie. Ukuba ibingakhange ikhubekise, eli nqaku belinokuba lulonwabo.
Uninzi lwabenzi be-smartphone bazama ukufaka imisebenzi ekhethekileyo ebavumela ukuba bazihlule kwabo bakhuphisana nabo. Esi sisiqhelo esidala kakhulu kodwa siye sacaca ngakumbi kule minyaka idlulileyo, xa ii-mobiles zala maxesha ziyeke ukuba yinguqu ngokubhekisele kuyilo lwazo, ukugxila kwimisebenzi yazo yangaphakathi kuphela.
Ingxaki ivela xa amanqaku amatsha engahlali evelisa izibonelelo ezibonakalayo kubasebenzisi, kwaye ngakumbi xa eminye imisebenzi inokubacaphukisa abanini abahambahambayo.
Yiyo kanye le yenzekileyo kutshanje ngeXiaomi Mi 6, iflegi ephambili yenkampani yaseTshayina ezisa indibaniselwano enamandla yehardware kunye noyilo, Kunye nexabiso lokhuphiswano.
Kukhutshwa ngenyanga ka-Epreli walo nyaka, entsha Xiaomi Mi 6 une Iscreen se-intshi eyi-5.15 kwaye ngaphakathi ngaphakathi kugcina iprosesa I-Snapdragon 835 kunye ne-6GB ye-RAM. Ngasemva sifumana ezimbini zekhamera ze-12-megapixel, ngelixa abalandeli be-selfies kuya kufuneka bazilungiselele ikhamera yayo ye-8-megapixel ngaphambili.
Ingxaki endikhankanye ngasentla ibangelwa yinto ye-selfie enikwe amandla yi-algorithm yobukrelekrele bokulinganisa. Xa uzama ukuthatha i-selfie, usetyenziso lwekhamera luyakukuxelela ubudala bakho kunye nesini.
Ngexesha abazama ukwazisa ngalo imibono emitsha malunga namalungelo abantu be-LGBTQ, akukho nto ihlaselayo kuneselfowuni ekuchaza ngaphandle kwemvakalelo njengendoda okanye umfazi. Kwaye ayenzi nokuba wenze umsebenzi olungileyo wokuqikelela ubudala.
Kwimeko yomnye wabahleli be esengozini, oneminyaka engama-26 ubudala, uXiaomi Mi 6 wamxelela ukuba imbonakalo yakhe yeyomntu oneminyaka engama-24, 27, 40 nama-29 ubudala, kuxhomekeka kwizinto ezohlukeneyo ezingacacanga ncam. Ubukho beiglasi, ngokwe-mobile app, budala kakhulu. Kutheni uXiaomi ecinga ukuba lo msebenzi uza kuphumelela?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » Ikhamera yeXiaomi Mi 6 iyabacaphukisa abasebenzisi ngomsebenzi okhohlakeleyo
Inkqubo yekhamera yeXiaomi ibandakanya lo msebenzi kangangeenkulungwane ... yinto ye-MIUI, hayi i-MI6.
Abantu banokuxela ukuba abanangxaki kubomi babantu bokwenyani, ukuba bayazenza, kwaye ngoku kuyabacinezela ukuba iapp iyabanika isini kunye nobudala, ezinokuthi zingasebenzi ngokulula kwimenyu yokuseta.
Ikwabandakanya ukubekwa kwe-geo, enokuthi iphinde icinywe, ngokuqinisekileyo ukuba nabani na oqhankqalazayo ngayo, khange ayiqonde kodwa uyakukhalaza.
Yiloo nto kwizengqondo abayibiza ngokuba ziingcinga ezigqwethekileyo, loo mntu endaweni yokucinga ukuba iingxaki zakhe uzifaka kwabanye kule meko ukuya kwiXiaomi.
Oko kusebenza sele kuzisiwe yikhamera yeXiaomi mi max kunye nemui 7. Ayisiyonto intsha. Andiyiqondi ingxwabangxwaba yento ezisetyenziswe zii-xiaomi kunye nezinye izixhobo ezine-miui ixesha elide.
UAlexander Juarez sitsho
Andiboni sizathu sokuba ube nomsindo. Ngabantu abanjani abanokucaphuka?
Phendula kuAlexander Juárez
UMiguel Angel Astudillo Alegria sitsho
Mva nje ukuba nomsindo ngayo yonke into yindlela yokufumana ingqalelo….
Phendula uMiguel Angel Astudillo Alegria
INes Tor sitsho
Mi6? UXiaomi unalo msebenzi iminyaka
Phendula kuNes Tor
URicardo Caicedo sitsho
'Ingxaki endikhankanye ngasentla ibangelwa ngumsebenzi we-selfie onikwe amandla yi-algorithm yobukrelekrele bokulinganisa. Xa uzama ukuthatha i-selfie, usetyenziso lwekhamera luyakuxelela ubudala bakho kunye nesini. "
Phendula uRicardo Caicedo
Yonke i-xiaomi izisa, loo msebenzi awuyonto intsha bendine-mi4 kwaye bendinayo, ukuba uyayithelekisa kakuhle into oyibekayo, ukuba ujije kakhulu amaxesha ngamaxesha uhamba nesiphumo sokulibaziseka
Njengoko kuchaziwe apha ngasentla, ngumsebenzi wakudala ukuba ezinye iiterminal zeXiaomi sele zibandakanyiwe ngaphambili.
Andazi ukuba ingxaki iphi, abantu banesithukuthezi kakhulu ukuba bayithathe njengengxaki endaweni yokuhleka, yindlela endiyithathe ngayo nabahlobo bam. Kucacile ukuba akukho zimvo zokubhala amanqaku
Ndivuma ngokupheleleyo, ndicinga ukuba ngumsebenzi owenziweyo ukwenza ukuhleka kwaye njengathi thina sine-Xiaomi evela kwi-miui 7 siyazi, lo msebenzi unokuyekiswa.
Ndicinga ukuba umbhali weli nqaku kufuneka afunde kancinci kwaye azazise, ​​ndicinga ukuba kuphela komntu obenomsindo ibinguye ngokwakhe.
Injani inkcitho yexesha ebikade ifundwa le.
UEduard noviski sitsho
Iza kuyo yonke iXiaomis kwaye ayiyimbi kangako xd
Phendula uEduard Noviski
UJohn McClane sitsho
Ngumsebenzi okwikhamera esemthethweni ye-miui8. Ndine-redmi 4 pro kwaye inayo nayo. Ndiyakholelwa ekubeni ukunika ukubaluleka kwinto encinci nengabalulekanga yinto eqhelekileyo kubantu abangenazo ezinye izinto abazenzayo, ngaphandle kokutsala umdla. Kukho abantu abakruqukayo kakhulu.
Phendula kuJohn McClane
U-Edward Somostelnholme sitsho
Ndizicaphukisa ngakumbi ezi ntlobo zokupapashwa kusisiyatha ezinganikeli nto. Bafumana kuphela amanqaku kwi-wey ukuze bafumane
Phendula uEdward Somostelnholme
UFrancisco León sitsho
Ungawususa lo msebenzi we-tag kwaye kunjalo. Yintoni ingxaki yokugcwala?
Phendula uFrancisco León
Ungatsho njani ukuba uzame iXiaomi ezininzi ukuba uthi le intsha xa uXiaomi ebeyifaka kwiiselfowuni zawo kangangeenkulungwane, ukuba andiphazami okokugqibela kuhlaziyo lwe-MIU7 ngaphambi kokuba i-MI8 iphume.
Isuntswana lobungqongqo beendaba
Xa ungazi ukuba wenze ntoni ngenqaku kwaye uyenza kwinto yokuqala ephumayo ngaphandle kokubhala ubuncinci ...
Kwilizwe apho iiblogger zinomdla wokubhloga, naziphi na iindaba zilungile… Njengobudenge njengoko kunokuvakala.
Thumela iimpumlo !!!
Impendulo ku: /
UDaniel Miñano sitsho
UXiaomi unalo msebenzi kangangeminyaka, onokuyekiswa ngokulula.
Inyani yile yokuba isebenza kakuhle kakhulu. Amaxesha amaninzi uyayikhonkotha, kwaye ukuba awuhleki xa ebiza umntu oneminyaka engama-27 asebenza naye oneminyaka engama-48 kwaye intombi yakhe ithi yindoda.
Phendula kuDaniel Miñano
Ewe ukufunda eli nqaku kuyinkcitha xesha. Ukuba le nto ubuyifuna kukusixelela iindaba eziza neXiaomi Mi6, ubunokuyenza loo nto, ngaphandle kokuyila izihloko ezinobungangamsha. Ngaba uyafuna ukuba yiblogger? Kulunge kakhulu, kodwa kuya kufuneka umbe kancinci kumxholo wenqaku, nditsho. Kukho umntu ongaziyo (okanye ongasebenzi ngale nto ndiyenzayo) kwaye uyakholelwa, ngelishwa.
Lo msebenzi mdala nge-sooo kwi-miui, ayisiyonto intsha okanye ikhethekileyo kwi-Mi6 kwaye inene, izama ukuthelekelela isini sakho, hayi ukuthanda kwakho ngokwesondo, okwahlukileyo ...
Akunakuba kubi kuwe ukuba wazazise ngaphambi kokubhala inqaku
Elinjani inqaku lePENOUS
Ndijonge nje ukutyelelwa ... yintoni i-intanethi eba ... Ngakumbi nangakumbi umxholo wePENOUS.
Akukho nto incinci ixeliweyo…. Oku bekune-MIUI V2 ubuncinci iminyaka emi-7 kwaye ithi intsha kwi-Mi6 ... oh owam ... Al carrer!
Phendula ku Isa
Njengoko bekuxelele ngaphambili, fumana ngaphambi kokubhala inqaku ... Nabani na onokubhala i-goosebumps
U-Elvis Bucatariu, ukubona ukuba unamanqaku angaphezu kwe-180 enziwe… ke ndiyakuxelela. Iikhrayitheriya ezingakumbi. Awunakho (okanye endaweni yoko akufuneki) uthathe kwaye ulahle olu hlobo lwezinto ngaphandle kokujonga ulwazi. Ngaphezu, loluphi uhlobo lwenqaku eli? Ukuba kunokubizwa ngokuba linqaku. Yintoni le? Uqhutywa yintoni ... okanye yintoni eqhuba i-Androidsis ukufumana izinto ezinje? Oku kufanele ukuba kubenendlela yokubonelela abafundi ngolwazi malunga netekhnoloji esingqonge kuthi, ukusuka kwinkqubela phambili enokuqaqanjiswa kwimodeli ethile kwimeko apho inkampani efana neXiaomi ifumana kuyo. Kodwa le yokuba abantu abaninzi bakhubekisiwe ngumsebenzi obuku-MIUI ixesha elide ... kuba undishiya phantse ndingathethi. Oku akusiniki nantoni na ngaphaya kwento yokuba awenzanga uphando olwaneleyo. Eyona nto iyasikhumbuza, kwakhona, ukuba uluntu luphela luthanda ukuba nezi zinto zingathandekiyo, kuba siza ... siziva kakubi ngomsebenzi osekwintsingiselo yawo de ube ugqibelele, (ukuba leyo yinjongo kaXiaomi) . Andazi kakuhle ukuba iya kufuna ntoni i-Androidsis kuwe, kodwa sele ndikuxelele ukuba ayinakuba njalo. Kuya kufuneka uqale ukuthatha ixesha labafundi bakho kancinci ngakumbi. Kuya kufuneka uhloniphe umfundi kancinci ngakumbi.
U-Elvis Bucatariu… ke ndiyakuxelela. Iikhrayitheriya ezingakumbi. Emva kokupapasha ngaphezulu kwamanqaku ali-180… ngekhe (okanye mandingaze) ukhethe kwaye ulahle olu hlobo lwezinto ngaphandle kokuphikisa ulwazi. Ngaphezu, loluphi uhlobo lwenqaku eli? Ukuba kunokubizwa ngokuba linqaku. Oku kufanele ukuba kubenendlela yokubonelela abafundi ngolwazi malunga netekhnoloji esingqonge kuthi, ukusuka kwinkqubela phambili enokuqaqanjiswa kwimodeli ethile kwimeko apho inkampani efana neXiaomi ifumana kuyo. Kodwa le yokuba abantu abaninzi bakhubekisiwe ngumsebenzi obuku-MIUI ixesha elide ... kuba undishiya phantse ndingathethi. Oku akusiniki nantoni na ngaphaya kwento yokuba awenzanga uphando olwaneleyo. Eyona nto iyasikhumbuza, kwakhona, ukuba uluntu luphela luthanda ukuba nezi zinto zingathandekiyo, kuba siza ... siziva kakubi ngomsebenzi osekwintsingiselo yawo de ube ugqibelele, (ukuba leyo yinjongo kaXiaomi) . Andazi kakuhle ukuba iya kufuna ntoni i-Androidsis kuwe, kodwa sele ndikuxelele ukuba ayinakuba njalo. Kuya kufuneka uqale ukuthatha ixesha labafundi bakho kancinci ngakumbi. Kuya kufuneka uhloniphe umfundi kancinci ngakumbi.
UElvis bucatariu sitsho
Ngokuqinisekileyo, bendingahoywanga ukuba inqaku alikho ntsha. Kodwa njengoko kunokubonwa kumthombo endiwongezile, iXiaomi Mi 6 iyandisile ngakumbi, kunye nokuzisa uphononongo olubi ngakumbi, ke kubonakala ngathi sisihloko esinomdla sokuxoxa.
Enkosi ngezimvo zakho kunye neengcebiso. Ndiya kubagcina engqondweni kwikamva.
Phendula uElvis Bucatariu
Enkosi kakhulu ngempendulo ka-Elvis, enkosi ngokulungileyo ekugqibeleni ndibona elo nyathelo. Kude kube ngoku, kuwo onke amaphepha ebesiwatyelele ngaphandle kwe-Androidsis, besinexhala lokuba iyawela ekuthandeni nasekuphulukaneni namanqaku, sinethemba lokuba esi sisiliphu kuphela. Ndicela uxolo nangokuphawula kwam okwenziwe, akubonakali ngathi kuthunyelwe okokuqala kwaye bendicinga ukuba icinyiwe.
Othandekayo uElvis Bucatariu, ndiyayihlonipha iyantlukwano yezimvo okanye inkululeko yokuthetha xa ndibhala «iindaba».
Bangaphi abasebenzisi oye wababonisana nabo ukuze babhale "abasebenzisi abacaphukisayo"?
Oku kwilizwe lam kuthiwa kuthengisa umsi! , mema into kwaye uyandise ukuze ufumane ingqalelo. Kule meko ibe nefuthe, inqaku lalinemibono emininzi, kodwa ngaphaya kokuba yinto elungileyo, mhlobo, ulahlekelwa kukuthenjwa njengo "onolwazi".
Undenze ndaphoxeka ngokubhala into kancinci kwaye uyenza njengeyona nto ivela kubo bonke abasebenzisi beMi 6.
Ngewubhale "iingcebiso zokukhubaza ukuqondwa kwesini kunye nobudala" kwaye ucacise ukuba ungayenza njani xa ungathandi.
Ngokuqinisekileyo uzakufumana umbulelo ongaphezulu kunokugxekwa ...
Ukuba babeka loo msebenzi kumnyele ... kundinika ukuba eli nqaku beliya kwahluka KAKHULU
I-Android O beta ibandakanya imowudi ye-incognito yeGboard